Otu esi etinye ihe na-agụ PDF na saịtị WordPress gị site na iji ihe nbudata nhọrọ | Martech Zone
Otu esi etinye ihe na-agụ PDF na saịtị WordPress gị site na iji ihe nbudata nhọrọ
Usoro nke na-aga n'ihu na-eto eto na ndị ahịa m bụ itinye akụrụngwa na saịtị ha na-amanye atụmanya ịdebanye aha iji budata ha. PDF kpọmkwem - gụnyere akwụkwọ ọcha, akwụkwọ ahịa, ihe ọmụmụ ihe, iji okwu, ntụziaka, wdg. Dị ka ihe atụ, ndị mmekọ na atụmanya anyị na-arịọkarị ka anyị ziga ha akwụkwọ ahịa iji kesaa onyinye ngwugwu anyị nwere. Otu ihe atụ na nso nso a bụ nke anyị Salesforce CRM Optimization ọrụ.
Saịtị ụfọdụ na-enye PDF site na bọtịnụ nbudata nke ndị ọbịa nwere ike pịa ibudata na mepee PDF. Enwere ọghọm ole na ole na nke a:
Ngwa PDF - Iji budata na mepee PDF, ndị ọrụ gị ga-enwerịrị ngwungwu ngwanrọ arụnyere ma hazie ya na mkpanaka ma ọ bụ desktọpụ ha.
Ụdị PDF - PDF nke ụlọ ọrụ na-emepụta na-enwekarị ụdị na mmelite. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị chekwaa njikọ ahụ na PDF ochie, ha nwere ike ịnwe mbipụta ochie.
Analytics - PDF bụ faịlụ dị na saịtị ma enweghị ibe weebụ ọ bụla metụtara ya iji weghara data nyocha ọ bụla na onye ọbịa ahụ.
Azịza ya bụ itinye PDF gị na ibe weebụ wee kesaa njikọ ahụ kama. Ọ bụrụ na anyị agbakwunyere PDF na onye na-agụ PDF n'ime ibe weebụ, onye ọbịa ahụ nwere ike ịlele PDF, budata PDF (ma ọ bụrụ na enyere ya aka) anyị nwere ike soro nlele peeji dị ka ibe ọ bụla ọzọ n'ime Google Analytics.
Ngwa mgbakwunye WordPress PDF
Ọ bụrụ na ị wụnye Ngwa mgbakwunye PDF maka WordPress, ị nwere ike imezu ihe a niile n'ụzọ dị mfe. Anyị nwere ihe atụ na nke anyị ndebanye ahịa mkpọsa ahịa. Ihe mgbakwunye PDF Embedder na-enye ma koodu mkpirisi nke ị nwere ike iji ma ọ bụ ị nwere ike iji ihe Gutenberg ha maka ndị editọ WordPress ndabara.
Nke a bụ ihe nsonaazụ ya dị na ibe:
2022-mkpọsa-ahịa-mgbasa ozi-nyochaa ndepụta-nyochaa
Enwere ezinụlọ nke plugins na-enye atụmatụ ole na ole:
Atụmatụ dị nchebe nke na-egbochi nbudata.
Megharị pagination na nhọrọ nbudata nhọrọ na elu ma ọ bụ ala nke PDF.
Igosipụta menu PDF na hover ma ọ bụ nke a na-ahụ anya n'oge niile.
Bọtịnụ ihuenyo zuru oke.
Ihe ntinye ederede thumbnail PDF.
Nlele nlele na nbudata nke igwe.
Ọrụ njikọ n'ime PDF.
Ọ dịghị mkpa ka koodu ihe ọ bụla, mgbe ị na Embed a PDF, ọ na-akpaghị aka na-egosiputa n'ime shortcodes!
Ejirila m ngwa mgbakwunye a na ọtụtụ saịtị ma ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ. Akwụkwọ ikike ha na-adịru mgbe ebighi ebi, yabụ azụgoro m ikike zuru oke nke na-enyere m aka iji ya na ọtụtụ saịtị dịka m chọrọ. Na $ 50, nke ahụ bụ nnukwu ego.
PDF Embedder maka WordPress
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka Ngwa mgbakwunye PDF (nakwa onye ahịa).
Tags: adobebudata pdfembed pdfotúfanye pdfpdfEmbed PDFpdf embedderngwa mgbakwunye pdfngwa mgbakwunye pdf wordpressWordPresswordpress pluginwp pdf
Jan 3, 2011 na 3: 40 AM
@dknewmedia Daalụ maka akụkọ gị ka esi etinye PDF! Ọ dị mfe ịgbaso, rụọ ọrụ dị ka amara, na nke kachasị mma, ọ nyere aka dozie nsogbu. Bravo! Nọgidenụ na-ezi ihe.